IXiaomi Mi 9 inokuboniswa ngoFebruwari 20 | I-Androidsis
IXiaomi Mi 9 iya kuziswa ngoFebruwari 20: Into esiyaziyo ngomnxeba
UXiaomi ngoku usebenza kwii-smartphones ezahlukeneyo. Enye yeemodeli ekulindeleke ukuba zifike kungekudala yiXiaomi Mi 9, iflegi entsha yohlobo lwaseTshayina. Kule veki sele sifumene idatha yokuqala malunga nale smartphone. Ukongeza, kuyaziwa ukuba sele iqinisekisiwe kwamanye amazwe. Ke ngoko, kulindelwe ukuba ukumiliselwa kwayo kuya kwenzeka kungekudala. Iingxelo ezintsha ziyakuqinisekisa oku.
Kuba kubonakala ngathi le Xiaomi Mi 9 iya kuziswa ngoFebruwari 20, ongumhla ofanayo nalowo Galaxy S10 y i-smartphone yokusonga Isamsung iya kuziswa. Nangona uphawu lungakuqinisekisi oku kwaye ludlala ukuphazamiseka ngoshicilelo lwalo lwamva nje kwinethiwekhi yoluntu.
Baninzi abavuzayo abatyhilele lo mhla wokunikezelwa kwezi yure zokugqibela. Ke yinto ekufuneka siyithathele ingqaleloNangona i-100% iqinisekile ukuba uphawu lwesiTshayina luza kubonisa iflegi yayo ngalo mhla wokufika okulindelweyo kudala. Kodwa kunokwenzeka ukuba oku kuyenzeka.
Inkampani yeXiaomi ibhengeze ukuba izakukhupha iXiaomi 9 ngoFebruwari 20. @PastortheDJ @SABCiindaba
- iphela yendalo (@UniverseIce) Februwari 13, 2019
Kule veki sifumene ukuvuza okuninzi malunga neXiaomi Mi 9. Enkosi kubo sinokufumana umbono ocacileyo wokuba le smartphone yohlobo lwesiTshayina iza kusishiya. Eyona nto iphambili kuluhlu, apho uphawu lwaseTshayina lufuna ukuphucula ubukho balo bamanye amazwe kweli candelo lentengiso. Icandelo apho bafuna ukuba nalo impumelelo efunyanwa nguHuawei, ngakumbi ngo-2018.
Nangona kunjalo ukuza kuthi ga ngoku, inkampani ngokwayo ayikhange ithethe nto malunga nokuboniswa kwale smartphone. Oko sele besishiyile sisiqinisekiso sokuba Baza kuba kwi-MWC 2019 e-Barcelona ukusukela nge-24 kaFebruwari. Ke ngoko, ukuba iXiaomi Mi 9 ayizukuboniswa ngoFebruwari 20, kunokwenzeka ukuba sizakuyibona kumnyhadala womnxeba e-Barcelona ekupheleni kwale nyanga. Nangona inkampani ingakhange ichaze ukuba zeziphi iifowuni abazakuzihambisa kulo msitho. Ukuqinisekiswa kobukho babo kwi-MWC kwenziwe kwinethiwekhi yabo. Bayenzile kwiprofayile yabo esemthethweni
Ukubala iintsuku kude kube # MWC19
Cinga iimveliso esiza kuzikhupha! #Yenze yenzeke pic.twitter.com/dv9NQVUHMQ
-Mi (@xiaomi) Februwari 13, 2019
Esikwaziyo ngeXiaomi Mi 9
Kule veki sifumene idatha entsha malunga ne-smartphone. Siyazi ukuba sele idlulile nge-TEENA, into edla ngokubonisa ngokucacileyo ukuba ukumiliselwa kwayo kusondele. Nangona inkampani iqhubeka nokudlala ukuphazamiseka nayo yonke into enxulumene nesi sixhobo. Kancinci kancinci besifunda iinkcukacha ngayo. Okusishiya sinombono ocacileyo wento onokuyilindela.
Le Xiaomi Mi 9 izakufika nge Isibonisi se-6,4-intshi ye-AMOLED ngesisombululo esigcweleyo seHD + Iiphikseli ezingama-1080 x 2220. Isikrini esine-notch, phakathi kwethontsi lamanzi kunye nesintu. Ngaphakathi kwesi sixhobo, uSpapdragon 855 usilindele, iprosesa enamandla kakhulu Isiphelo esiphakamileyo kwi-Android namhlanje.
Esi sixhobo siza kufika sinekhamera yangemva kathathu. Le yinto bekuxelwe iinyanga, kodwa kubonakala ngathi ekugqibeleni kuya kuzaliseka. Ingayimvakalelo ye-48 MP kunye nenye i-12 MP. Ngelixa isithathu sensors iya kuba yi-3D enye. Ngale ndlela iba yeyokuqala uphawu lwesiTshayina ukuba nekhamera engasemva kathathu.
Kulindelwe ukuba kuyakubakho indibaniselwano ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi okufumanekayo kule Xiaomi Mi 9. Enye yazo, esele ibonwe ukuza kuthi ga ngoku, iya kuba yi-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina. Ngokubhekisele kwibhetri, ifowuni yayiza kuba ne-3.500 mAh enye. Ihlala ixhaphakile kwezi modeli zohlobo lweTshayina, ngaphandle kokumangaliswa okuninzi, ke ngoko.
Ekugqibeleni, ukusuka kwinto esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku, uthembisa ukuba isiphelo esihle esihle, kweyona igqityiweyo. Ke kuyakufuneka sijonge ukuba ekugqibeleni izakuba nge-20 kaFebruwari xa sidibana nale Xiaomi Mi 9. Okanye ukuba kuya kufuneka silinde i-MWC 2019, apho inkampani sele iqinisekisile ubukho bayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Mi 9 iya kuziswa ngoFebruwari 20: Into esiyaziyo ngomnxeba
I-WhatsApp izakuvumela ukwala izimemo kwiqela lezingxoxo
Ukuphakama kobumnyama yintshukumo enkulu ye-RPG onokuthi wonwabe ngayo ngefowuni yakho